PEAR LADA: SHARAXAADDA IYO ASTAAMAHA NOOCYADA KALA DUWAN, BEERASHADA IYO DARYEELKA - KU'SAABSAN
Talooyin sare oo ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka noocyo pear Lada ee beerta uu
Qurxoon, casaan ama cagaaran, aad u taajir ah, miraha dhirta sonkorta ayaa muddo dheer loo arkaa mid ka mid ah midhaha ugu jecel. Ku'saabsan wuxuu dareemayaa dareen buuxa, saxarka sonkortuna wuxuu dhalaalayaa afkaaga. Noocyo badan oo pear ah ayaa loo yaqaan, laakiin mid ka mid ah noocyada ugu jecel yahay nooc ka mid ah pear pear ah Maanta waxaan ka wada hadli doonaa waxyaabaha gaarka ah ee sii kordhaya kala duwan, oo ku saabsan wax kasta oo la xiriira daryeelka ee Lada kala duwan.
Astaamaha iyo faa'iidooyinka Lada
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee pada lada waa in noocyada kala duwan ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu horreeya. Geedkuna waa dhexdhexaad oo kala duwan oo leh qaab istiraatiijiyadeed. Sida noocyada kala duwan ee isteroberi hore, jilibka Lada waxay leedahay midab cad cawl, iyo jirridda geed yar oo ah midab khafiif ah. Caws caleen waa dhexdhexaad ah, 1.5-3 cm, caleemaha lafteedu waa oval, oo ku rinjiyey midab cagaaran oo leh dusha saafiga ah.
Ubaxyo Lada ee midabka yar, soo ururiyey inflorescences ee 6-8 gogo '. Miraha of pada pada waa yar yahay, ukunta-qaabeeya. Miisaanka celceliska hal miro waa -100-110 g, maqaarka ku jira miro ayaa ah midab huruud ah, oo leh cadho. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee noocyada kala duwan waa in miraha ay u bislaadaan goor hore - bilawga xagaaga, waxayna ku sii jiri karaan geedka illaa heerkulku hoos u dhaco ilaa 0 °.
Ma taqaanaa? Magaca Grusha Lada ayaa la helay sababtoo ah isku dar ah sifooyinka 2 noocyo kale: Olga noocyada iyo noocyada Cimilada Xoolaha.
Hilibka pear waa dhuxul badan oo ku yaala, oo leh qurux badan, dhadhan macaan oo macaan iyo iftiin, caraf udgoon. Miraha waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin ah, waxay yihiin kuwo nafaqo leh oo casiir leh.
Faa'iidada ugu weyn waa adkaysiga jiilaalka sare ee kala duwan ee Lada, iyo sidoo kale xaqiiqda ah in pear ku dhowaad marnaba wax cudur ah.
Haddii aad rabto in aad gaarto ugu sareeya ee isdabajooga Lada, markaa waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inaad ka taxadartid tan oo aad ka baxdid geedkii. Dhammaan waxyaabaha ku saabsan habdhaqankan, waan sii wadi doonaa.
Sida loo doorto geedo beerto
Si aad geedkaaga u dhegto, bannaanka ayaa kugula talinaya inaad isticmaasho geedo yar yar oo u jeestay hal sanno ama laba. Haddii dhirku horay u jiray 3 sano, waxaa jira khatar ah in aan la aqbalin.
Waa muhiim! Mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee xulashada geedo waxay noqon doontaa midabaynta of jir iyo midabka quruxda madow.
Haddii jiritaanka seedling uusan leexin, ama waxaa jira cillado farsamo, waxaa ka wanaagsan inaad diiddo noocan oo kale ah seedling ah. Sidoo kale, markaad dooranayso wax soo saarka, waa inaad u hoggansamid shuruudaha qaarkood ee la xidhiidha nidaamka asaasiga ah ee seedling: xididdadiisa waa in si fiican loo horumariyaa oo aanay lahayn (xitaa kuwa ugu yar) calaamadaha dhiiqa, dhaawacyada ama cudurada.
In seedling caafimaad leh, xididdadu waxay noqon doonaan qaro weyn oo waaweyn, ugu yaraan 20-25 cm dheer.
Goorta la beero
Casaankii lada waxaa la beeran karaa labadii guga iyo dayrta. Ma jiro mid isku mid ah beeralayda arrintan. Caadi ahaan, pear waa la beeray dayrta - geeddi-socodka waa in la fuliyaa ilaa dhammaadka Oktoobar.
Koraaya pear Lada guga waxay soo jeedinaysaa in ay tahay in la beeray ka hor bilowga May, halka ubbooyinku weli aan ubaxu, si ay dhirta u qaadan kartaa xidid ka hor cimilada qabow. Dabcan, bannaanka ugu badan ku talinaynaa beeritaanka dayrta: xididdada xajmiga ah waxay si dhakhso ah u sameeyaan waqtigan, sababtoo ah ciidda waa qoyan.
Sida loo doorto oo loo diyaariyo meel loo dego
Waxaa fiican inaad ku beerato pear meel bannaan oo iftiin leh oo dusha sare leh: waxaa fiican inaad doorato koonfurta ama dhinaca koonfur bari ee beertaada. Halka waa in si firfircoon loo iftiimiyo ugu yaraan 10 saacadood, si kastaba ha noqotee, haddii pear-ka la dego qorraxda tooska ah ee tooska ah, ka dibna kaliya qalajinta, huruudka iyo caleenta caleemaha ayaa la gaari karaa.
Sidaa darteed, at ugu sarraysa qorraxda geedka wuxuu ugu fiican yahay pritenyat. Sida ciidda, ka dibna pear waa unpretentious, laakiin doorashada ugu fiican ee noocyo kala duwan waxay noqon doontaa ciidda madow, loamy, chestnut iyo xayawaanka duurjoogta, oo leh heerka ugu sareeya qoyaan. Pear waa in laga qariyaa qoraalada iyo dabaylaha qabow.
Haddii meesha aad u socotid geed, carrada waa dhoobo, xaaladdu waa la hagaajin karaa iyadoo la ciribtiro ciidda leh compost ama peat. Waa arrin aad u muhiim ah marka la dooranayo iyo diyaarinta goobta waa joogitaanka dheecaan, sababtoo ah pear ma u dulqaadanayso muddada dheer ee biyaha.
Ka hor inta aadan bilaabin beeritaanka, waxaad u baahan tahay inaad u diyaargaroobto godadka dhulka oo leh ballac 70-80 cm iyo qoto dheer oo ah 60 cm, masaafada u dhaxaysa kuraasta waa inay ahaataa ilaa 1-2 mitir.
Ku shub humus ama compost galay godkii ceelka hoose, waxaad sidoo kale ku daadi kartaa peat.
Birta qulqulka leh tuulo, dhulka soo qaado oo wadata xayawaan.
On buuraha aad u baahan tahay si taxadar leh dhig seedling, toosin xididada foomka of fan ah.
Daadi seedling leh ciidda on top, laakiin si ay qoorta xidid peek 5-7 cm kor ku heerarka dhulka.
Qaado geedka seeding by dhexda iyo ruxin dhowr jeer si loo buuxiyo meel bannaan oo u dhexeeya xididada.
Dhuuji dhulka hareeraha.
Kobcinta jirridda si ay u xidhaan godka.
Goobta meesha aad ku beertay seedling, ka samee dalool yar, biyo waraabi.
Si aad u mulcho kanaalka humus ama peat.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la beeri, nidaamka xididka pear waxaa lagu daaweeyaa kiniinka potassium, si loo nadiifiyo xididka, iyo sidoo kale inuu hubiyo dhaawaca farsamada iyo cudurrada, xididdada waxyeellada ah ayaa si taxadar leh loo gooyaa iyadoo la xoqo meesha lagu jaro garaynta dhuxusha.
Noocyada kala duwan ee pollinators pear Lada: "Space, Northerner, Chizhovskaya, Rogneda, Otradnenskaya. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiriyo dhirta dhalinyarada u dhow geedaha kala duwan.
Si uu geedku kuugu raaxaysto miro aad u wanaagsan oo caafimaad leh, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho. Kala duwanaanta noocyada Lada waa mid fudud waxayna ka kooban tahay dhowr marxaladood oo kaliya, ka dib oo aanad heli karin oo kaliya mid caafimaad leh, laakiin sidoo kale waxay hagaajinaysaa tayada. Hadda waxaanu falanqeyn doonaa marxaladan.
Sidee loo cabbaa biyaha
Koofiyadu mar walba ma laha biyo ku filan oo ka yimaada biyaha dhulka ama roobka. Sidaa darteed, mararka qaarkood waxay u baahan tahay waraabin dheeri ah. Haddii abaarta aaggaaga ay dib u dhacdo, markaa waxaad u baahan tahay inaad barkiis u isticmaashid heerka 3 baaldiyada halkii mitir labajibbaaran. Habkan waxaad u baahan tahay inaad ku qoydo pear ee xilliga koritaanka ugu firfircoon - dhammaadka August.
Haddii pear-kaagu weli yar yahay, waxaad u baahan tahay inaad ka waraabiso marar badan oo ka mid ah geed weyn. Xaaladdan oo kale, dhirta waxaa lagu waraabiyaa goobo, qoday majarafad, kaas oo markaa la gooyey.
In xilliga dayrta roodhuna u baahan tahay xoog, iyo sidaas darteed waxaa la qoyan ka hor jiilaalka. Waraabinta toddobaadkii hal mar (haddii ciidda aanay ahayn qoyan) waxay noqon doontaa mid ku filan.
Waa muhiim! Habka ugu fiican ee loo waraabiyo pada lada waa in lagu rusheeyo. Habkani waa inuu ku tuuro biyaha cadaadis xoog leh hawada agagaarka geedka.
Inta jeer ee ay cunayaan
Fikradda ah in pear waa in la quudiyo laga bilaabo daqiiqo of disembering waa khalad, sababtoo ah sanadka ugu horeeya ee nolosha, xididdada ee Lada weli ku filan u buuxsamay nafaqooyin. Laakiin horeyba 2, iyo xataa ilaa 3 sano waxaad u baahan tahay inaad samayso bacriminta for pears. Bacriminta Lada waxaa lagu dabaqaa saddex marxaladood:
Marxaladda koowaad qabta guga. Guga hore, inta lagu guda jiro muddada barar-qoyan, qaybta koowaad ee bacriminta ayaa lagu dabaqayaa si loo hagaajiyo tayada dalagga mustaqbalka. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa dhaymahan soo socda: 90 g oo ah HOL waxay u baahan tahay in lagu kala diro 7 litir oo biyo ah iyo biyo geedka ku dhex wareegaya wareega biyaha.
Ma taqaanaa? Saamaynta HOL waxay la mid tahay saameynta xalinta digada digaagga, labada xalba si fudud ayey u beddeli karaan.
Dharka guga sidoo kale waxay tilmaamaysaa bacrimin ka dib markii geedku uu yaraaday. Halkan waxaad ku isticmaali kartaa nitroammofosku oo ah 1: 200. Under hal geed ah waxaad ku daadi kartaa wax ka badan 3 baaldiyo oo dareere ah.
Laba jeer Warshad waxaa la quudin jiray xagaaga, iyo in ka badan si qaas ah qeybtii labaad ee xagaaga. Inta lagu jiro muddadan, dhirta waxaa la bacrimiyey leh potassium iyo Fosfooraska fosfooraska. Haddii aad ka heshay cillado geedka geedka, waxaa lagu dillaacin karaa xalalka digada, mullein laba toddobaad ka dib marka la cuno quudinta foliar.
Saddexaad iyo waqtigii ugu dambeeyey ee Bacriminta waxaa lagu dabaqaa dayrta si loogu diyaariyo pear for wintering. Dheecaanku waa inuu billaabaa marka caleenta oo dhan ay ka dhacdo. Xalka raashin wanaagsan wuxuu noqon doonaa: 15 g oo ah kalamiidka potassium iyo 35 g of superphosphate ee granules waa in lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah. Qayb ka mid ah dharka noocan oo kale ah waxaa loo isticmaalaa 1 mitir oo laba jibbaaran. Waxaa suurtogal ah in lagu daro 150 g oo ah ash kiilo mitir labajibbaaran oo ciid ah.
Goorta iyo sida loo sameeyo manjooyin
Gooyo, oo loogu talagalay qaabeynta qaabka saxda ah ee quruxda leh ee taajka, ayaa la qaadaa oo kaliya 4-ta sano ee ugu horreeya. Later, marka geedka gaboobo, manjooyin ayaa loo sameeyaa si loo noolaado geedka iyo ka soo saaro caleemaha buka.
Manjooyin lada lada ayaa lagula talinayaa guga hore. Laamaha laamaha si looga saaro bukaanka cudurka iyo ka hortagga. Sidoo kale ka saar kuwa laamiyada dhoobada leh, oo aan u oggolaan in ay koraan.
Nidaamka xoqitaanka laftiisa waxaa lagu sameeyaa dillaac badan, oo leh dhaqdhaqaaqyo fiiqan oo degdeg ah si looga fogaado dhaawacyo dheeraad ah jilif iyo jir. Qaybaha leh dhexroor ka badan 1.5 cm waa in lagu daaweeyaa garoonka beerta ama lagu sifeeyo dhuxul la jajabiyey.
Goorta goosashada iyo sida loo kaydiyo dalagyada
Midhaha ugu horreysa ee khudradda ayaa horay kuu keeni doona 2-4 sano. Caadi ahaan khudradda miro u dhow dhammaadka bisha Agoosto waxay joogi doontaa laanta muddo dheer. Ilaa 50 kg oo miraha caafimaad leh oo tayo sare leh ayaa laga soo qaadi karaa hal geed.
Goobaha si fiican u ururi cimilada qalalan. Miraha waxay u baahan yihiin in laga soo qaato laanta si wada jir leh jirida, loo kala saaro oo la geliyo sanduuqyo alwaax ama bac ah. Goosashada waxaa lagu kaydiyaa ma aha mid aad u dheer, ilaa 60 maalmood heerkul ah 0 °, sidaa daraadeed waxa fiican in la doorto meel qalalan oo qabow ah loogu talagalay kaydinta.
Qodobka ugu muhiimsani waa in khudradda caanaha ee sanduuqyada ay ka wanaagsan yihiin inaysan isku laabnayn midba midka kale si looga fogaado waxyeellada farsamada. Wakhti ahaan waa in la hubiyaa haddii ay jiraan wax isteroberi ah oo bilaabay in la jebiyo, ama "jiran", miraha noocan oo kale ah waa in isla markiiba laga saaro sanduuqa.
In gaadiidka isteroberi, noocyada Lada ma aha mid u adkaysta, sidaa darteed waa in si taxaddar leh oo si taxadar leh loo qaado.
Miyaan u baahanahay hoyga xilliga qaboobaha
Ku'saabsan - Geedka-qabow-qabow oo aad u qabow, kaas oo qaan-gaar ah u adkeysan karaan heerkulka hoos u--30 ° C. Gaar ahaan si fiican aad u baahan tahay inaad ilaaliso geedaha yar yar ka hor jiilaalka, waxay u baahan yihiin hoy.
Ilaa 4 sano jir geedo loogu talagalay jiilaalka ayaa ka wanaagsan in lagu duubo waraaqda. Dhirta da'yartu ma farageliyaan hoyga xididada ee saldhigga hoose ee jiriga. Si arrintan loo sameeyo, samee caleenta ciidda leh dhuxul lakabka lakabka 15-20 cm.
Si loo ilaaliyo dhirta qaangaarka ah, daboolka beerta gaarka ah waxaa loo isticmaalaa, iyo barafka barafka ah ayaa lagu xareeyaa jirkiisa, taas oo ilaalin doonta xididka.
Isteroberi - Hawlgalku waa mid fudud, hase yeeshee, waa lagama maarmaan in la fuliyo daryeelka si adag, ka dibna Lada waxay ku siin doontaa miraha sonkorta delicious ee ku farxi doona qarniyadii hore ee deyrta.